Idi China Rubber Mgbasa nkwonkwo ụlọ ọrụ mmepụta ihe na suppliers |Arex
Ma n'ịrụ ụgbọ mmiri, injinia ọrụ ụlọ, ụlọ ọrụ mmanụ ịnweta mmanụ ma ọ bụ na igwe, ihe ọkụkụ na ụlọ ọrụ ike - ngwaahịa elastomer nke ụlọ ọrụ anyị rụpụtara na-elekwasị anya n'ibelata esemokwu, kewapụ mkpọtụ na ịma jijiji, na-anata mgbasawanye ọkụ ma ọ bụ ntinye ụlọ ma kwụọ ụgwọ maka ihe ndị na-adịghị mma n'oge echichi.Anyị na-emepụta ngwaahịa maka ọtụtụ ngwa dị iche iche.
Njikọ Mgbasa robas bụ njikọ na-agbanwe agbanwe emepụtara site na elastomers eke ma ọ bụ nke sịntetik na akwa nwere nkwado ọla emebere iji nye enyemaka nrụgide na sistemu ọkpọkọ n'ihi mgbanwe ọkụ.
Mgbe enweghị ike ịme mgbanwe maka mmegharị a n'ime sistemu ọkpọkọ n'onwe ya, nkwonkwo mgbasawanye bụ ezigbo ngwọta.Ngwunye mgbasawanye roba na-akwụ ụgwọ maka mmegharị n'akụkụ, mgbawa na angular na-egbochi mmebi na oge na-adịghị mma nke ọrụ osisi.
Oke sitere na ND32 ruo ND600.Single sphere ahụ EPDM/NBR, anyị nwere ike ime nha ahaziri dịka ihe ndị ahịa chọrọ.
Naịlọn nkwado ime ime nwere mgbanaka ígwè.
Emebere ya ka ọ nweta mmegharị mgbasawanye, ịma jijiji na pipeline conduction mmiri.
Otu ebili mmiri na-ewu na obere ibu ọnwụ.
Na-amịpụta ụda ma kewapụ ịma jijiji n'akụkụ ọ bụla.Achọghị nkwonkwo mgbakọ.
Ihe owuwu pụrụ iche nke nkwonkwo roba nwere ike dozie nsogbu dịka
Vibration, mkpọtụ, ujo, corrosion, abrasion.
Nchegbu, nrụgide ibu ibu, mmegharị akụrụngwa.
Vibration, Nrụgide Nrụgide na Ntugharị na Sistemụ Ọkụ.
kpo oku, ntụ oyi, jụrụ oyi overheated mmiri, mmiri usoro, mgbapụta.
ọdụ ụgbọ mmiri, njikọ nke compressors, ụlọ ọrụ mmepụta ihe & nrụnye ụgbọ mmiri.
Nke gara aga: Ịkwụsị nkwonkwo
Osote: Yiri mpe mpe akwa na-eguzogide ọgwụ
Njikọ Mgbasa Rubber Ugboro Abụọ
Njikọ Mgbasa Rubber Epdm
Njikọ Mgbasa roba Flanged
Ọkọlọtọ Mgbasawanye Rba
Njikọ Mgbasa Ọla & Bellows
© Nwebiisinka 20102021: Ikike niile echekwabara.> 50mm roba hose naagbanwe agbanwe Njikọ Mgbasawanye Seismic Njikọ Mgbasa Ọla Valve mmanụ ihe mmịfe Valve Control Pneumatic Ntupu ihuenyo Ngwaahịa niile